တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အိမ်ရှင်မတာဝန် ခေတ္တလွှဲပြောင်းယူစဉ်
"Shopping".I have ever readalot about doing shopping , in the magazines , in the journals, etc...Most of authors describe buying expensive cloths, stuffs, etc.
I hardly see any description about going to the market and buy actual things for daily food.You makeadifference! Bravo!!
I can realize how difficult it was.
Daily food is important because food is not only to our strength but also for our health.
The important role of MOM who is in fact the doctor at home especially for nutrition.
10/28/2006 4:19 PM
မမေဓါ။ ပုစွန်ဆိတ်လေးတွေက အခွံမနွှာရင် ပိုချိုတယ် ခင်ဗျ။ အခွံနဲ့ စားတတ်ရင်ပေါ့ဗျာ။ (မမေဓါ့ အဖေကတော့ ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်)
မမေဓါစာတွေ ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတယ်။ ဈေးဝယ်တာလေး၊ ဟင်းချက်တာလေးကို မမေဓါရေးထားတာ စာကောင်းကောင်း ဖြစ်တယ်ဗျာ။
10/29/2006 7:26 PM
အခွံမနွှာရင် ပိုချိုသလားတော့မသိဘူး။ စားရင် အခွံတွေက လာလာစူးလို့ ကျမလဲ သိပ်တော့မကြိုက်ဖူးရှင့်။
ပုဇွန်ကွက်ကြော်လိုမျိုး ကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ရင်တော့ အခွံနဲ့လဲ စားလို့ကောင်းတယ်။
ကျမစာတွေဖတ်ပြီး အားပေးတဲ့အတွက် တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အားတွေတက်ပြီး စာတွေဆက်ရေးနေဖြစ်တာပါ။
ကြာရင် အမြင်ကတ်မှာတောင် စိုးနေရတယ်။ ရေးလွန်းအားကြီးလို့လေ။
10/30/2006 5:19 AM
မမေစာဖတ်ရတာကောင်းတယ်၊ ဟီး ပုဇွန်ဆိတ်ကို အခွံအကုန်သင်နေမှတော့ အကျောတင်မဟုတ်ဘူး တစ်ကိုယ်လုံးတက်တော့မှာပေါ့ တကယ်က ဖင်ဆိတ် ကောင်းဆိတ်ပြီး အလယ်ခွံလောက်ချန်ထားရင် ပိုမြန်တယ်လေ သူ့ချေးကြောင်းကလဲ ခေါင်းဆိတ်ပြီး အဲ့ဒီနေရာကနေ အစလေးရှိတယ် ဆွဲထုတ်လိုက်ယုံပဲ။ ပြီးတော့ ပြည်ကြီးငါးရဲ့မျက်လုံးကို အဲ့လိုဆွဲမထုတ်ရဘူး၊ ဒါးနဲ့ သူ့မျက်လုံးနောက်နားကနေ လှီးလိုက်ရတယ်မရဲ့၊ ပြီးတော့မှ ခန္မာကိုယ်ကို အလယ်ကခွဲ အပေါ်က အရေပြားနဲ့ အထဲက အကျိအချွဲတွေကို ဓါးနဲ့ခြစ်ထုတ် ပြီးတော့မှ လှီးရတယ် (အဟဲ ဆရာဝင်လုပ်သွားတာ) :)
1/21/2007 5:36 AM